Nepal's Biggest National Daily Publishes OUR story! - Sarswati Foundation
अमेरिकादेखि आरुपोखरीसम्मनरेन्द्र रौले
भगवानले भन्छन् रे, 'तँ आँट म पुर्‍याउँछु ।' सुवासको सुन्दर अभियानलाई धेरैले साथ दिँदैछन् । लन्डनको इन्भेस्टमेन्टकी निर्देशक एनिया लिचोटाले सुवासको कामबाट प्रभावित भएर १५ हजार डलर दिइसकिन् । विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाको 'इपिक चे न्ज' संस्थाले पनि १२ हजार डलर प्रदान गरिसकेको छ । त्यस्तै अमेरिकामा सँगै अध्ययन गरेका साथीहरू पनि बेलाबेलामा कार्यक्रम आयो जना गरेर पैसा उठाउँछन् र सुवासलाई प्रदान गर्छन् । अमेरिका जान मरिहत्ते गर्नेले सुवासबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । उनलाइ पैसा मात्रै कमाऊँ भन्ने लोभलालच कहिल्यै लागेन । पढ्न, बुझ्न र सिक्नका लागि मात्र अमेरिका जानुपर्छ, तर सधैँका उतै बस्न होइन भन्ने मान्यता बोकेका छन् उनले । 'पैसा कमाउने भए यहाँ आउँथे र ?' उनले भने, 'आफू मात्र खुसी भएर भएन । आफू जन्मिएको गाउँ पनि त बनाउनुपर्‍यो नि ।' सुवास मुस्काराउँदा पर हिमाल खुलेको थियो । Source: http://www.ekantipur.com/saptahik/article/?id=3774